အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ အနာဂတ်နိုင်ငံရေး (သုံးသပ်ချက် + ဝေဖန်ချက်) | Save Burma
ပိတောက်မြေ ဘလော့ဂ်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပါတယ်။ ကြေညာချက်မှ အဓိကတောင်းဆိုချက်ကတော့ ၉၀ ရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမြန်ဆုံးခေါ်ရန်၊ လွှတ်တော်ကနေပြီး အနိုင်ရနိုင်ငံရေးပါတီ၊ ရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ်၊ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်၊ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်၊ အခြေခံဥပဒေ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များပါဝင်တဲ့ အခြေခံဥပဒေ ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး ကော်မတီဖွဲ့ရန်နဲ့ အဲဒီကော်မတီက အခြေခံဥပဒေ ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းကို ခြောက်လအတွင် အပြီးဆောင်ရွက်ရန် ဆိုတာ တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတောင်းဆိုချက်တွေဟာ အရင်တုံးကလိုပါပဲ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အခြေခံ ရပ်တည်ချက်ဖြစ်တဲ့ ၉၀ ရလဒ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအသစ်ကို အသိအမှတ်မပြုဘူးဆိုတဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို အသွင်တစ်မျိုးနဲ့ ပြန်တင်ပြ လိုက်တာပါပဲ။ အခြေခံဥပဒေ ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး ကော်မတီဆိုတာလည်း ပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားများနဲ့ စစ်တပ် သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးရေးကို ပြောချင်တာပါပဲ။ ဒီတော့ ဒီအဆိုပြုချက်ဟာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ပါ့မလား။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား၊ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။
တကယ်လို့ နအဖ က အဲဒီအဆိုပြုချက်ကို လိုက်လျောတယ်ပဲထားဦး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို သုံးသပ်တဲ့ ကော်မတီဖွဲ့မယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေကို ဘယ်အဖွဲ့အစည်းက ကိုယ်စားပြုမှာလဲ၊ CRPP, NEC, NDF, NCUB ဆိုတဲ့ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့တွေ၊ KNU, KNPP, CNF, SSA-S စသည် စသည်ဖြင့် တိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးခြင်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အဖွဲ့တွေကြားမှာ ကိုယ်စားလှယ် ဘယ်လို ရွေးမှာလည်း။ အဲဒီ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ဘယ်လိုညှိနှိုင်း ယူကြမှာလည်း။ ဘယ်လို Mandate ပေးလိုက်မှာလည်း။ အဖွဲ့အားလုံးက ခေါင်းဆောင်တွေ သွားတက်လို့ မရသလို၊ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘဲ ပြန်ပြန်ပြီး တင်ပြနေရရင် အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီအဖွဲ့တွေကြားမှာ အနာဂတ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထူးသဖြင့် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်း တာ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဖွဲ့စည်းတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောထား တစ်ခုထဲရှိတယ်လို့ ယူဆရင် စိတ်ကူးယဉ်တာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များကို ကော်မတီထဲမှာပါခွင့်ပြုမလား၊ ဒါမှမဟုတ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အရင်ဆွေးနွေးပြီးမှာ ကော်မတီဖွဲ့ဖို့ ဆွေးနွေးမှာလား ဆိုတာကလည်း စဉ်းစားရမယ့် အချက်ပါ။
ဒီလိုပါပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေထဲမှာလည်း ကချင်ဆို သုံးဖွဲ့၊ ကရင်ဆို လေးဖွဲ့ စသည်ဖြင့် ကွဲ နေသေးတော့ အားလုံးကို တက်ခွင့် ပေးမှာလား၊ သူတို့ကို တက်ခွင့်ပေးရင် နယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့ ကချင်၊ ၀၊ ပအို့ဝ်ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းကိုလည်း တက်ခွင့် ပေးရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ကော်မတီက လွှတ်တော်ထက်တောင် လူများသွားမလား မသိဘူး။ ဒါကတော့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အဆိုကို နအဖကလက်ခံခဲ့ရင် စတွေ့ရမယ့် အခြေအနေပါ။ ဆွေးနွေးရင် ဖြစ်လာမယ့် အခြေအနေကို မစဉ်းစား သေးပါဘူး။ ကျွန်တော့ကို ကေအိုင်အိုခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်က နအဖနဲ့ ကေအိုင်အို ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတုံးက အပစ်အခတ် ရပ်ဆိုင်းရေးလို့ သုံးမလား၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးလို့ သုံးမလားဆိုတာနဲ့တင် သုံးရက်လောက်ကြာတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးတာ တစ်ခုလုံးက တစ်နှစ်နဲ့ နှစ်လနီးပါး ကြာတယ်လို့ ပြောပြဖူးပါတယ်။ ဒီကိစ္စဆွေးနွေးရင် ကြေညာချက်မှာ ပြောသလို ခြောက်လနဲ့ ပြီးပါ့မလား။ ဒါဆိုရင် ဒီကြားထဲမှာ နအဖက ပဲ ဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်နေရမယ့် သဘောဆောင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကြေညာချက်မှာ လွှတ်တော်ကနေ အစိုးရဖွဲ့မယ်လို့ ပြောမထားပါဘူး။ အခြေခံဥပဒေ ပြန်လည် သုံးသပ်တဲ့ ကော်မတီဖွဲ့ဖို့ပဲ ပါပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒါက စိတ်ကူးယဉ်မှုသက်သက်ပါ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ နအဖက လမ်းပြ မြေပုံကို ဆက်သွားမယ်လို့ အတိအလင်းပြောထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နအဖ ပြောထားတာတွေကို ပြန်ကြည့်ရင် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် လမ်းဖွင့်ထားဆဲဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီသင့်မြတ်ရေးဟာ လမ်းပြမြေပုံနဲ့ အခြေခံဥပဒေသစ် ဘောင်ထဲကပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ရွေးကောက်ပွဲမှာ အစိုးရဆန့်ကျင်သူရော၊ ထောက်ခံသူတွေပါ ပါဝင်ခွင့်ပေးမယ်။ တကယ်လို့ အရွေးခံရရင် ဆန့်ကျင်သူတွေဟာ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး ကိစ္စတွေမှာ အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ ပါဝင်ခွင့်ရမယ်။ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းရာမှာ ပါဝင်ခွင့်ရှိမယ်လို့ နိုင်ငံတကာကို ပြောနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ လက်တွေ့ကျကျ ပြောမယ်ဆိုရင် အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သူတွေရော၊ ထောက်ခံသူတွေပါ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုမှာ ပါချင်ရင် အခြေခံဥပဒေဘောင်ထဲ ကပဲ ပါရမယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းများ အနေနဲ့ကလည်း အခြေခံဥပဒေသစ်ဟာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို သက်ဆိုးရှည်မယ့် ဥပဒေဖြစ်တယ်၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ စစ်တပ်ပါဝင်မှုကို တရားဝင်ဖြစ်စေမယ့် ဥပဒေဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဆန့်ကျင်နေကြပါတယ်။ ဒီတော့ အခြေခံ ဥပဒေဘောင်ထဲကနေ ၀င်လုပ်ဖို့ဆိုရင် ဒီအခြေခံဥပဒေမှာ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားသူများအတွက် နေရာမရှိဘူးလား၊ စစ်တပ်ကပဲ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးအာဏာတွေကို ချုပ်ကိုင်ထားမှာလား၊ တိုင်းရင်းသားများရဲ့ အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးလားဆိုတာကို ဆန်းစစ်ဖို့ လိုပါမယ်။
အခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်တပ်က သမ္မတဖြစ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းရှိတာနဲ့ ပြည်ထဲရေး၊ ကာကွယ်ရေးနဲ့ နယ်စပ်ဒေသ၀န်ကြီးများကို ဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ထောက်ပြပြီး ဒါဟာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်များဟာ တင်းပြည့် ကျပ်ပြည့်ဒီမိုကရေစီ စံများနဲ့ မကိုက်ဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် ဒီအခြေအနေအောက်မှာ ဒီမိုကရေစီပါတီများ အနေနဲ့ လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောရင် အစွန်းရောက်ရာ ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ စစ်တပ်က သမ္မတဖြစ်မယ်။ ၀န်ကြီးသုံးပါးက စစ်တပ်က ခန့်တာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင် ဒီသမ္မတနဲ့ ၀န်ကြီးများဟာ လွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ ဥပဒေများကို အကောင်အထည် ဖော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခြေခံဥပဒေက အမေရိကန်ပုံစံ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးနဲ့ တရားစီရင်ရေးအာဏာကို ခွဲခြားထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သမ္မတဟာ အမိန့် ဒီဂရီများထုတ်ပြန်ပြီး အုပ်ချုပ်လို့ မရပါဘူး။ ပြောရရင် အမေရိကန်သမ္မတလိုတောင် လွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ ဥပဒေများကို ဗီတိုအာဏာနဲ့ ပယ်ချခွင့်တောင်မရှိပါဘူး။
ဒီတော့ ဥပဒေပြုခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာ စစ်တပ်က ၂၅% ပါနေတာက ဘာအခက်အခဲဖြစ်နိုင်လဲလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ သာမန်ဥပဒေကြမ်းများကို မဲပေးသူရဲ့ ထက်ဝက်ကျော်က ထောက်ခံရင် အတည်ဖြစ်ပါတယ်။ မဲပေးခွင့်ရှိသူအားလုံးရဲ့ ထက်ဝက်ကျော် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တပ်မတော် သား ၂၅% ဆိုတာက အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ လုပ်တဲ့အချိန်နဲ့ သမ္မတ ရွေးချယ်ခြင်းများမှာသာ အရေးပါပါတယ်။ ဒီ ၂၅% ဟာ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ နေ့စဉ်အုပ်ချုပ်မှု၊ ဥပဒေပြု ကိစ္စတွေကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့ထက် အခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အဓိကဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ နားလည်မိပါတယ်။ ဒီတော့ နိုင်ငံသားများရဲ့ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများ၊ တိုင်းရင်းသားများရဲ့ အခွင့်အရေးများ၊ နိုင်ငံတော် ရဲ့ လူမှုရေး၊နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေးတို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေများကို အရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့ ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတယ်။ ဒီဥပဒေများကို သမ္မတဦးဆောင်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က အကောင်အထည်ဖော်အောင် ကြီးကြပ်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို မလုပ်ဘူးဆိုရင် သမ္မတနဲ့ ၀န်ကြီးများကို ပြစ်တင်စွတ်စွဲပြီး ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူများအနေနဲ့ အရွေးချယ်ခံရမယ်ဆိုရင် အခုအခြေအနေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် နိုင်ငံရေးအရအများကြီး လှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ပြည်နယ်အဆင့် ဥပဒေပြုရေးတွေမှာလည်း အလားတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကို ဆောင်းပါးတွေရေးခဲ့ ပြီးပြီဖြစ်လို့ ဒီလောက်ပဲအတိုချုပ် သုံးသပ်ပြချင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီအခြေခံဥပဒေပါအခွင့်အရေးများကို အသုံးချပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်။ အရွေးချယ်ခံ ရမယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ ဟောဒီအခွင့်အရေးတွေကို ရလာမယ်ထင်ပါတယ်။
တစ်။ လွှတ်တော်ဟာ စစ်တပ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ တိုင်းရင်းသားကို်ယ်စားလှယ်တွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ နေရာဖြစ်လာ မယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် သီးခြားတောင်းခံနေစရာ မလိုဘူး။ ဒီနေရာမှာ တွဲလုပ်ရင် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက် နိုင်ရင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို ဦးတည်သွားနိုင်မယ်။
နှစ်။ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဘယ်အဖွဲ့အစည်းက ကိုယ်စားပြုမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စအငြင်းပွားစရာ မရှိတော့ဘူး။ တိုင်းရင်းသား မဲဆန္ဒရှင်တွေကပဲ ဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်။
သုံး။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်က ဆွေးနွေး အဖြေရှာနိုင်မယ်။ လိုအပ်တဲ့ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်မယ်။
ဒါတွေကတော့ လွှတ်တော်ကနေ ရလာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးများထဲက အဓိကကျတဲ့အချက်များကို ဖော်ပြတာပါ။ ဒီတော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးရှေ့တစ်လှမ်းတက်ဖို့ဆိုရင် ဒီအခြေခံဥပဒေဘောင်ထဲက လုပ်ဖို့ဆိုတာ လက်တွေ့အကျဆုံးနဲ့ အဖြစ်နိုင်ဆုံး နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှ အချက်အခြာ အကျဆုံးမေးခွန်းက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ဆိုရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ၁၉၉၀ ရလဒ်ကို စွန့်လွှတ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုစွန့်လွှတ်ဖို့အတွက် နအဖ ဘက်ကလည်း အာမခံချက်များ၊ လိုက်လျောချက်များပေးရပါလိမ့်မယ်။ အဓိကကတော့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတဖို့ သေချာစေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ပြည်သူ့အဆုံးအဖြတ်ပဲဖြစ်ပြီး၊ စစ်တပ်ရော၊ စစ်တပ်ကို ထောက်ခံသူရော၊ ဆန့်ကျင်သူတွေကပါ လက်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ခံများကပဲ နိုင်ငံရှေ့ရေးကို ဆုံးဖြတ် သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
၉၀ ရလဒ်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ဖို့ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို ဆွေးနွေးဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်-
တစ်။ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများဟာ နိုင်ငံတကာစံများနဲ့အညီ ဖြစ်ဖို့အတွက် နအဖနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမယ်။
နှစ် ။ ရွေးကောက်ပွဲကို ကုလသမဂ္ဂက လေ့လာအကဲဖြတ်ခွင့် ရှိရမယ်။ ကုလသမဂ္ဂထံမှ နည်းပညာ အကူအညီများ ရယူရမယ်။
သုံး။ မဲဆွယ်ပွဲကာလမှ လွတ်လပ်စွာမဲဆွယ်စည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့်ရှိရမယ်။
လေး။ နိုင်ငံရေးပါတီများဘက်ကလည်း အကြမ်းဖက်ဝါဒကို မကျင့်သုံးဖို့၊ လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး အကြမ်းဖက်မှုများ၊ အဓိကရုဏ်းများ မဖြစ်စေဖို့အတွက် အာမခံရမယ်။
ဒါကတော့ အခြေခံစဉ်းစားရန်အချက်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြားအပေးအယူ လုပ်လို့ရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အထက်ကအချက်တွေကို သဘောတူပြီးရင် ၉၀ ကိုယ်စားလှယ်များက လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခေါ်၊ အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ပြိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်၊ မိမိတို့ဆန္ဒအလျှောက် လွှတ်တော်ကို ဖျက်သိမ်းဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်မျိုး၊ ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့သူများ အရေးကိစ္စမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာခင်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေထွက်လာမှာ သေချာပါတယ်။ ဒီဥပဒေ အရ ပါတီတွေ ဖွဲ့ ပြီးရင် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပေါ်လာပါမယ်။ ဒီတော့ နိုင်ငံရေးပါတီ ဥပဒေပေါ်လာတဲ့ အချိန်မှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က မှတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုရင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ဆက်နေလို့ရမှာ မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်တော့ ၉၀ ရလဒ်ဆိုတာလည်း ရှိမှမဟုတ် တော့ပါဘူး။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီး ရပ်သွားအောင်လုပ်ဖို့ ဆိုတာလည်း ၈၈၊ ၉၀၊ ၉၆၊ ၂၀၀၇ သင်ခန်းစာ များအရ ဖြစ်နိုင်ချေအတော်နည်းတယ်ဆိုတာ လက်ခံရတော့မှာပါ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှ အမျိုးသား ဒ်ီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လို အင်အားစုကြီး ဘေးမှာကျန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်ထဲမှာ စစ်တပ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ ပါတီတွေကို ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းနိုင်မယ့် အင်အားလျော့သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဘေးထွက်ထိုင်နေလိုက်ရင် ဘယ်သူတွေ အပျော်ဆုံးဖြစ်မယ် ထင်ပါသလဲ။ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ ဒီတော့ သက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ လက်တွေ့ကျကျ ပကတိအခြေအနေကို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်ရမယ့် အချိန်ကို ရောက်နေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
၈၈ တုံးက ဒေါက်တာမောင်မောင် က အခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့ မဆလက တစ်ခုတည်းသော ပါတီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုဖျက်ပြီး ပါတီစုံစနစ်ကျင့်သုံးမယ်။ ၇၄ ဥပဒေဘောင်ထဲကနေ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ကြပါ။ အစိုးရဖွဲ့ကြပါလို့ ပြောခဲ့တုံးက ကြားဖြတ်အစိုးရ ကြွေးကျော်သံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ငြင်းခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒီရဲ့ ရလဒ်က ဘာလဲဆိုတာ သိပြီးပါပြီ။ ဒီတစ်ခါ အဆုံးအဖြတ်မမှားဖို့လိုပါတယ်။
Posted by ပိတောက်မြေ at 8:10:00 PM
ကိုဂျုးရဲ့ ဒီဆောင်းပါးအတွက်ရေးခဲ့တဲ့ comment ကို သဘောကျလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။—————
ခုတလော နအဖ သတင်းစာတွေ ဘလော့တွေမှာ NLDက ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို စွန့််လွှတ်ပြီး နအဖစိတ်ကြိုက် ၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ နောက်တစ်ခါရွေးကောက်ပွဲထပ်ဝင်ပြိုင်ဘို့ ဘေးတီးပေါ်လစီဆောင်းပါးတွေ တော်တော်များများနေရာယူလာပါတယ်။ မိတ်ဆွေကြီး ကိုပိတောက်ကလဲ အားကျမခံရေးပါတယ်။ ဘာ Compromise မှမပါဘဲ နအဖ လုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ဘောင်ထဲကဘဲ NLDက တဘက်သတ် အလျှော့ပေးပူးပေါင်းဖို့။
NLDခမျာလဲ နအဖနဲ့ လက်တွဲအလုပ်ဖြစ်ချင်လွန်းလို့ ခြေသလုံးမဖက်ရုံတမယ် အလျှော့ပေးကမ်းလှမ်းနေတာပါဗျာ။ နောက်ဆုံး သူတို့ကို နည်းမှန်လမ်းမှန်လွှတ်တော်ခေါ်ပေးရင် အစိုးရမဖွဲ့ပါဘူး၊ နအဖကိုအာဏာပြန်အပ်ပါ့မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အခြေခံဥပဒေပြန်လည်သုံးသပ်ရေး လုပ်ငန်းလေးကို အတူလက်တွဲ လုပ်ကြရအောင်ပါ၊ နအဖအာဏာယူထားပါ၊ နအဖကဘဲ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးပါ ဆိုတဲ့အထိဘဲ။
နအဖက ဘာမှပြန်မပြောသေးဘူး ကိုပိတောက်က NLDကမ်းလှမ်းချက်တွေဟာ ၁၉၉၀ရလဒ်ကိုအခြေခံလို့ တစ်ခုမှအလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ စိတ်ကူးရင်မှုသက်သက်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ နအဖဆွဲတဲ့အခြေခံဥပဒေဟာ နအဖအသာစီးယူထားတာတွေ များတာမှန်ပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဘက်သား ပါတီတွေအတွက် လှုပ်သာရှားသာရှိပါတယ်၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ရှေ့တစ်လှမ်းတက်ဖို့ဆိုရင် ဒီအခြေခံဥပဒေဘောင်ထဲက လုပ်ဖို့ဆိုတာလက်တွေ့ အကျဆုံးနဲ့အဖြစ်နိုင်ဆုံးနည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး နအဖအခြေခံဥပဒေကိုအကောင်းမြင်ဘက်က ဇောင်းပေးရေးသား သွား ပါတယ်။
မှန်ပါတယ်၊ ကိုပိတောက်ပြောသွားတာတွေကတော့ ချောလို့ဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ မေးစရာမေးခွန်းတွေရှိနေတယ် –
(၁) အစိုးရက NLD ကို ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့ရလဒ်ကို စွန့််လွှတ်ပါလို့သာပြောနေတယ် ဘာကြောင့်စွန့်လွှတ်ရမှာလဲ၊ ဘာအတွက်စွန့်လွှတ် ရမှာလဲ၊ တရားသဖြင့် reason မပေးနိုင်ဘူး။
(၂) ရလဒ်ကို စွန့်လွှတ်ပေးလိုက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရတစ်ခုဟာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီး ကိုယ်မကြိုက်သူနိုင်တဲ့အခါ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ အသိအမှတ်မပြု၊ အာဏာမလွှဲဘဲနေတာ မှန်တယ်လို့လက်ခံလိုက်သလိုဖြစ်မနေဘူးလား။ မဟုတ်တာလုပ်ထားပြီး ပီပီပြင်ပြင်နဲ့ နာနာညစ်ရင် မြန်မာတွေ မခံနိုင်ပါဘူး၊ ဒူးထောက်ကြရတာပါဘဲလို့ နောင်လာနောင်သားတွေအတွက် တလွဲသင်ခန်းစာပေးခဲ့သလိုများ ဖြစ်မနေဘူးလား? တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့ရေးမကောင်းဘူး။
(၃) နအဖအစိုးရအပေါ်ယုံကြည်မှုကဘယ်လောက်ရှိသင့်လဲ။ ယခင်ပြောခဲ့တာတွေ၊ လုပ်ရပ်တွေအရဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဦးတည်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေမလုပ်ချင်လို့ ၁၉၉၀ရလဒ်ကိုအသိအမှတ်မပြုဘဲ အခြေခံဥပဒေဆွဲပြီးရွေးကောက်ပွဲနောက်တစ်ခါထပ်လုပ်တာဆိုတော့ သူ့ဆီက ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေ ရလာလိမ့်မယ်လို့ စိတ်ချယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီး ပုံအပ်သင့်သလား။ ဘယ်သူတာဝန်ယူနိုင်လဲ၊ စောင့်မကြည့်သင့်ဘူးလား? တကယ်တန်း မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဒီမေးခွန်းသုံးခုကိုဖြေကြည့်တော့ (၁) ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲကို NLDနိုင်သွားလို့ အသိအမှတ်မပြုတာ၊ အာဏာမလွှဲတာဖြစ်တယ်၊ နောက်ထပ်နိုင်ရင်လည်း အသိအမှတ်ပြုမှာမဟုတ်လို့ ၀င်မပြိုင်သင့်ဘူး (၂) နောင်လာနောင်သားတွေ အတွက် တလွဲသင်ခန်းစာဖြစ်စေတယ်၊ မြန်မာလူမျိုးတွေ သိက္ခာကျလှတယ်၊ လက်မခံသင့်ဘူး။ (၃) လုံးလုံးလျှားလျှားမယုံသင့်ဘူး၊ စောင့်ကြည့်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ အဖြေဘဲ ရတယ်။
၁၉၉၀ရလဒ်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို NLDပါတီက အသိအမှတ်ပြု ၀င်မပြိုင်သင့်ဘူး၊ အစိုးရသက်တမ်းတစ်ခုလောက်တော့ အနဲဆုံး စောင့်ကြည့်သင့်တယ်။ (ဆရာနေ၀င်းမောင်က NLDဟာ ၂၀၁၀မှာ တစ်ဝက်ဘဲဝင်ပြိုင်ပြီး အာဏာမမက်မောဘူးဆိုတာ ပြသင့်တယ် လို့ပြောခဲ့တယ်၊ ကျွန်တော်ကတော့ လုံးလုံးဝင်မပြိုင်တာနဲ့ ပြတာ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။)
အသိအမှတ်မပြုခြင်းဖြင့် ရလာမဲ့အကျိုးးဆက်တွေက – ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ နအဖအတွက် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖေါ်ဆောင်ဘို့ တာဝန်ပိုကြီးမယ်၊ တိုင်းပြည်အဘက်ဘက်ကကောင်းအောင်ကျိုးစားဖို့ တွန်းအားဖြစ်လာမယ်၊ မြန်မာလူမျိုးတွေ မဟုတ်မတရားအလုပ်မခံဘူး၊ ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာကိုပြနိုင်မယ်။ နောင်လာနောင်သားတွေအတွက် စံပြနမူနာကောင်းဖြစ်မယ်။ ကိုပိတောက်တို့ပြောသလို ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ဒီမိုကရေစီပါတီတွေ လှုပ်ရှားလို့ ရမယ်မရဘူးဆိုတာ ဘယ်သူမှတာဝန်မယူနိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့် အသိအမှတ်ပြုဘို့ မလောဘဲ စောင့်ကြည့်တာမှန်တယ်။ ဒီ option ကို NLD ကိုင်ထား ရမယ်။ အခုငြင်းနေမဲ့အစား နအဖက တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ် တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်ပြီဆိုရင်၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေလေးစားလိုက်နာလာပြီဆိုရင် အချိန်မရွေးအသိအမှတ်ပြု ပူးပေါင်းလို့ရပါတယ်။ နအဖကိုညစ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ နအဖကို စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ အရည်အခြင်းပြဘို့အခွင့်အရေး ပေးထားတာ။
ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကျိုးမဲ့က – NLDကို ဖျက်သိမ်းခံရနိုင်တယ် ဆိုတာတစ်ခုဘဲရှိတယ်။ ဘာမှမလျော့ပါးပါဘူး။ ခုလည်း ဘာလှုပ်ရှားနေရလို့လဲ။ နောက်ပြီး၁၉၈၉ကထဲက ဥပဒေအရမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီဟာ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ရုံနဲ့တော့ အလိုလိုပျက်မသွားဘူး ထင်တယ်။ တခြားနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်း ရွေးကောက်ပွဲကိုသပိတ်မှောက်တာ ခဏခဏ ကြားဘူးပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ အခါဝင်မယ် မ၀င်နိုင်ရင်မ၀င်ဘဲနေမယ်၊ သူ့သဘော၊ မ၀င်လို့ ပါတီပျက်မသွားဘူးထင်တယ်။ အစိုးရက တမင်ဖျက်မှပျက်မယ်။
ကိုင်း-နောက်ဆုံး အဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ အစိုးရကညစ်ပတ်ပြီပါတီးဖျက်ခံရလဲ NLDဆိုတာ ဦးစူးစမ်းပြောသလိုဆို နာမည်ဘဲ၊ Decoration ဘဲ။ မရှိလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာသိမြန်မာသိပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့ တသီးပုဂ္ဂလအဖြစ်လည်းဝင်ပြိုင်နိုင်တာဘဲ။ လိုအပ်ရင်ပါတီအသစ်ထပ်ထောင်လဲ ရတာဘဲ။ နာမည်ရှိပြီးသားမို့ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာသူတို့ ဘေးရောက်မသွားနိုင်ပါဘူး၊ လုပ်နိုင်တဲ့ alternative တွေအများကြီးလို့ ပြောချင်တာပါ။ လုပ်တာမလုပ်တာတော့ မသိပါ။ ဒီအကွက်တွေကို NLDလဲမြင်မှာပါ။
သေချာပါတယ် နအဖက Compromise မလုပ်ဘဲနဲ့တော့ NLDက နောက်တစ်ခါရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မပြိုင်ပါဘူး။ ဘေးတီးပေါ်လစီဆောင်းပါးတွေ ရေးနေရင် မောရုံဘဲရှိမယ်။
ကိုပိတောက်ကနောက်နေပြန်ပါပြီ၊ ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲပါဆိုမှ အစိုးရဆန့်ကျင်သူရော ထောက်ခံသူပါ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ပေးမယ် ဆိုတာအဆန်းလုပ်ပြောနေတယ်။ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ ဒီအခွင့်အရေးမပေးလို့ ဘာပေးရမှာလဲ။ ဒီလောက်တော့သိမယ်ထင်တာ။
၈၈တုံးက မဆလပါတီက ဒေါက်တာမောင်မောင်ပေးတဲ့ အခွင့်အရေးမယူမိလို့ နှစ်တွေဒီလောက်ကြာကုန်ရတယ်လို့ ကိုပိတောက်ကပြောချင် တယ်လား၊ ၁၉၉၀မှာ ဒီကနေ့လိုဘဲ တပ်မတော်ဦးစီးချုပ်ကလုပ်ပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမို့ ယုံယုံကြည်ကြည်ဝင်ခဲ့ကြပါသဗျား။ ကိတ်မုန့်တစ်တုံး စားဘူးခဲ့ပြီလေ၊ အခုဟာကနောက်တစ်တုံးစားဘို့ ဆရာတို့ကဘေးတီးနေတာ။ ဒေါက်တာမောင်မောင်လို အရပ်သားက လုပ်သွားတယ်ဆို ကြားကောင်းပါသေးတယ်။
ကိုပိတောက်ပြောသလို တိုင်းပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီပါတီတွေ လှုပ်ရှားနေပြီ၊ ဒိမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေ ရသင့်သလောက်ရနေပြီဆိုလဲ ဒေါ်စုနဲ့ NLDကို ကျွန်တော်တို့ မလိုတော့ဘူး၊ မေ့လိုက်တော့၊ သူတို့ကို ရာဇ၀င်ထဲမှာ ထားခဲ့ကြစို့ပေါ့။